Uprofita pamusoro peMoabhi (1-47)
48 Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, pamusoro peMoabhi:+ “Nebho+ ine nhamo, nekuti yaparadzwa! Kiriyataimu+ yanyadziswa uye yatorwa. Nzvimbo yekupotera* yanyadziswa uye yavhundutswa.+ 2 Havacharumbidzi Moabhi. Vakairongera muHeshbhoni+ kuti iparare vachiti: ‘Uyai, ngatiiparadze irege kuva rudzi.’ Newewo Madmeni, ramba wakanyarara,Nekuti bakatwa riri kukutevera. 3 Pane mhere iri kubva kuHoronaimu+Yekuparadza nekuwondomoka kukuru. 4 Moabhi yaputswa. Vana vayo vari kuchema. 5 Vari kukwidza mukwidza wekuRuhiti vachingochema. Uye pamateru ekubva kuHoronaimu vari kunzwa kuchema kwekurwadziwa nemhaka yedambudziko.+ 6 Tizai kuti mupone!* Munofanira kuita semujunipa uri murenje. 7 Unovimba nemabasa ako nepfuma yako,Saka iwewo uchakundwa. Uye Kemoshi+ achatapwaPamwe chete nevapristi vake nemachinda ake. 8 Muparadzi achauya pamaguta ese,Uye hapana guta richapona.+ Bani richaparara,Uye nyika yakati sandara ichaparadzwa sezvataurwa naJehovha. 9 Misirai Moabhi chiratidzo,Nekuti paichange ichiparara kuita matongo ichatiza,Uye maguta ayo achava chinhu chinotyisa,Asina anogaramo.+ 10 Ngaatukwe uya anoita basa raJehovha asi asingaiti nemwoyo wese! Ngaatukwe uya anodzora bakatwa rake kuti risadeura ropa! 11 Kubva vachiri vadiki, vaMoabhi vanga vakagara zvakanaka,Sewaini yakagara pamasese. Havasati vambodururwa kubva mune mumwe mudziyo vachiiswa mune mumwe,Uye havana kumbobvira vatapwa. Ndokusaka manakiro avo parurimi asina kumbochinja,Uye kunhuhwirira kwavo kusina kuchinja. 12 “‘Saka inzwa! mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘andichavatumira varume kuti vavapidigure. Vachavakutura vosiya midziyo yavo isina chinhu, uye vachaputsa-putsa makate avo. 13 VaMoabhi vachanyara naKemoshi, sekunyara kunoita imba yaIsraeri neBheteri yayaivimba nayo.+ 14 Mungashinga here kuti: “Tiri varwi vane simba vakagadzirira kurwa”?’+ 15 ‘Moabhi yaparadzwa,Maguta ayo apindwa nemuvengi,+Uye majaya avo anopfuura mamwe ese aurayiwa,’+ Ndizvo zvataurwa naMambo, ane zita rekuti Jehovha wemauto.+ 16 Dambudziko revaMoabhi rava kutouya,Uye kuparara kwavo kwava kutosvika.+ 17 Vaya vese vakavapoteredza vachatovanzwira tsitsi,Vaya vese vanoziva zita ravo. Vaudzei kuti: ‘Inga tsvimbo yakasimba yatyorwa, iwo mudonzvo werunako!’ 18 Dzika pasi uchibva pakukudzwa kwako,Ugare pasi uine nyota,* haiwa iwe mwanasikana ari kugara muDhibhoni,+Nekuti muparadzi weMoabhi auya kuzokurwisa,Uye achaparadza nhare* dzako.+ 19 Mira pamugwagwa urambe wakatarisa, iwe mugari wemuAroeri.+ Bvunza murume ari kutiza nemukadzi ari kupukunyuka kuti, ‘Chii chaitika?’ 20 Moabhi yanyadziswa uye yavhundutswa. Ridzai mhere uye shevedzerai. Zivisai muAnoni+ kuti Moabhi yaparadzwa. 21 “Kutonga kwauya panyika yakati sandara,+ paHoroni, Jahazi,+ neMefaati;+ 22 paDhibhoni,+ Nebho,+ neBheti-dhibrataimu; 23 paKiriyataimu,+ Bheti-gamuri, neBheti-miyoni;+ 24 paKeriyoti+ neBhozra; nepamaguta ese enyika yeMoabhi, ari pedyo neari kure. 25 ‘Simba* reMoabhi ragurwa;Ruoko rwayo rwatyorwa,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 26 ‘Mudhakisei,+ nekuti azvikudza pamberi paJehovha,+Moabhi ari kuumburuka pamarutsi ake,Uye ava chiseko. 27 Israeri haana kuva chiseko kwauri here?+ Akawanikwa pakati pembavha here,Zvekuti ungamudzungudzira musoro uchitaura zvakaipa nezvake? 28 Ibvai mumaguta mugare padombo, imi vagari vemuMoabhi,Uye itai senjiva inovaka dendere rayo pamawere.’” 29 “Takanzwa nezvekudada kwaMoabhi, uyo anozvikudza kwazvo,Uye takanzwa nezvekuzvitutumadza kwake, kudada kwake, nekuzvikudza kwake, uye kuzvikwidziridza kwemwoyo wake.”+ 30 “‘Ndinoziva nezvekushatirwa kwake kukuru,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Asi mashoko ake asina maturo achashaya basa. Hapana chavachaita. 31 Ndokusaka ndichachema Moabhi;Ndichashevedzera pamusoro pevaMoabhi veseUye ndichachema varume vekuKiri-heresi.+ 32 Ndichakuchema kupfuura kuchema kwangu Jazeri,+Haiwa iwe muzambiringa weSibma.+ Nhungirwa dzako idzo dziri kukura zvakanaka dzayambuka gungwa. Dzasvika kugungwa, kuJazeri. Michero yako yemuzhizha negoho rako remazambiringaZvasvikirwa nemuparadzi.+ 33 Mufaro mukuru nekupembera nemufaro zvabviswa mumunda wemicheroUye munyika yeMoabhi.+ Ndaita kuti waini imire kuyerera ichibva muchisviniro chewaini. Hapana achange achitsika-tsika achishevedzera nemufaro. Kushevedzera kwacho kuchange kuri kumwewo kushevedzera.’”+ 34 “‘Pane kushevedzera kuri kubva kuHeshbhoni+ kuchinonzwika kuEreyare.+ Vanosimudza manzwi avo achinzwika kuJahazi,+Kubva kuZoari kusvika kuHoronaimu,+ kusvika kuEgrati-sherishiya. Kunyange mvura yeNimrimu ichaoma.+ 35 Ndichaita kuti muMoabhi musare musina munhuAnouya nemupiro panzvimbo yakakwirira,Neuya anopa zvibayiro kunamwari wake,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 36 ‘Ndokusaka mwoyo wangu uchachema Moabhi* senyere,*+Uye mwoyo wangu uchachema varume* vekuKiri-heresi senyere.* Nekuti pfuma yaakawana ichaparara. 37 Nekuti misoro yese ine mhanza,+Uye ndebvu dzese dzakadimburirwa. Maoko ese akachekwa-chekwa,+Uye muhudyu mavo mune masaga!’”+ 38 “‘Pamatenga ese edzimba dzeMoabhiNemumisika yayo yeseInongova mhere yega yega. Nekuti ndaputsa MoabhiSehari yaraswa,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 39 ‘Yavhundutswa chaizvo! Ridzai mhere! Moabhi yatendeuka ichinyara! Moabhi yava chiseko,Chinhu chinotyisa kune vese vakaipoteredza.’” 40 “Nekuti zvanzi naJehovha: ‘Sezvinoita gondo parinodzika nekukurumidza richibva mudenga,+Achatambanudza mapapiro ake pamusoro peMoabhi.+ 41 Maguta achatorwa,Uye nhare dzayo dzichatorwa nechisimba. Zuva iroro, mwoyo yevarwi veMoabhiIchaita semwoyo wemukadzi ari kusununguka.’” 42 “‘Uye Moabhi achaparadzwa kuti arege kuva rudzi,+Nekuti azvitutumadza pamberi paJehovha.+ 43 Pamberi pako pane zvinhu zvinotyisa, negomba nechiteyeso,Haiwa iwe mugari wemuMoabhi,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 44 ‘Wese anenge achitiza zvinhu zvinotyisa achawira mugomba,Uye wese anenge achibuda mugomba achabatwa nechiteyeso.’ ‘Nekuti ndichaunzira vaMoabhi gore rekurangwa kwavo,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 45 ‘Vaya vari kutiza vamira mumumvuri weHeshbhoni vasisina simba. Nekuti muHeshbhoni muchabuda motoUye muSihoni muchabuda rimi remoto.+ Uchaparadza huma yeMoabhiNedehenya revanakomana vemheremhere.’+ 46 ‘Une nhamo iwe Moabhi! Vanhu vaKemoshi+ vaparara. Nekuti vanakomana vako vatapwa,Uye vanasikana vako vaendeswa kuutapwa.+ 47 Asi ndichaunganidza nhapwa dzeMoabhi mumazuva ekupedzisira,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Mutongo weMoabhi unogumira pano.’”+
^ Kana kuti “muponese mweya yenyu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “panyika yakaoma.”
^ Kana kuti “usingazogadzikani pamusoro peMoabhi.”
^ Kureva, nyere yairidzwa pamariro.
^ Kana kuti “usingazogadzikani pamusoro pevarume.”